Ma kugula talin kartaa wax kasta oo wanaagsan Amazon US tracking software?
Haddii su'aashaada ku xiran tahay Amazon US raadinta software ah ee dareenka caadiga ah, Waxaan ku tusi karaa qalab Deliveries for Android. Barnaamijkan Amazon US tracking software wuxuu sii wadi karaa dhammaan shixnadahaaga - si sahlan iyo sahlan. Wax kasta oo aad suurtogal u tahay inaad xilligan xaadirka noqon karto - dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad soo bandhigto aqoonsiga dhalashada oo aad ka hubiso horumarka maraakiibta iyo goobta dhabta ah.
Ka mid ah dhinacyada ugu xoog badan ee Soo-saaridda Amazon US qalabka raadraaca, waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo faa'idooyinka soo socda ee ugu muhiimsan ee aan ku riyaaqsanaa ugu badnaan dhan:
Raadinta - haddii aad ka mid tahay lamaanayaasha sahaminta ah ee Amazon, raadinta baakadka iyadoo la adeegsanayo Khariidadaha Google ayaa diyaar u ah.
Sync - howlaha adeegga sinaanta adeeg ayaa iga caawiyay markii aan ku khasbanaaday in aan ka shaqeeyo qalab badan.
Ogaysiisyada asalka ah - looma baahna in la ilaaliyo bixinta had iyo jeer furan. Waxaa jira doorasho weyn oo lagu helayo ogaysiis mar kasta oo xaaladda xaashida isbeddeleyso.
Dhiirigelinta - qalabkani waxa uu cadeeyay in si fiican loo filayo kiniinnada. Waxaan ku tijaabiyay casriga casriga ah sidoo kale - wax dhibaato ahna kuma jirin, waxaan ku raaxaysan jiray hawlo badan oo dufan ah - sida haddii aan ku shaqeynayay kombuyuutarkayga.
Widget - waxay ahayd mid aad u fiican oo aad ufilan si aad ugu daro widgetka guud ee degdega ah adigoon furin codsigaaga - kaliya shaashadayda guriga.
Tilmaamyadan waxay u muuqdeen kuwo aad u faa'iido badan sida isticmaale ahaan lacag la'aan ah. Si aan runta kuu sheego, ma aanan helin fursad aan ku tijaabiyo qaabka ay u shaqeeyaan. Dadku waxay yiraahdaan haddii aad iibsatid, ma heli doontid hawlo dheeraad ah oo keliya, laakiin ka saari xayeysiiskaas dhibta ah hal mar iyo. Isla mar ahaantaana, waxaa jiri doona qaar ka mid ah ikhtiyaaraadka u habeynta dheeraadka ah ee la heli karo marka la iibsado.
Haddii aad weli xiisaynayso, halkan waa hawlaha ugu muhiimsan ee keenaya bixinta Pro (dabcan, sida uu qabo horumarinta barnaamijka):
Fursadaha horey u-dejinta ee la shaqeeya xisaabro badan oo labadaba on Amazon laftiisa, iyo sidoo kale on eBay.
Qaab dhismeedka qaabka iyo qaabka xayeysiis la'aanta ah.
Mawduucyo kala duwan oo macaamiisha ah oo la heli karo oo la heli karo oo furan.
Luqado badan oo lagu taageerayo qaybta la bixiyey.
iyo goobo kale oo badan oo sahlan.
Delonaha Amazon US Tracking app ayaa cadeeyey in ay ii runtii aniga ii gaar ah, gaar ahaan marka aan u baahanahay inaan isku dhejiyo tiro ka mid ah my akoontiga my iibsado on Amazon iyo eBay. Ma ogtahay haddii nuqulkooda dakhliga oo buuxa uu run ahaantii yahay mid faa'iido leh, laakiin waxa aan u sheegi karo hubaal - qaabkoodii bilaashka ahaa ee ay kufilan yihiin inaan ku filnaado aniga oo aan iloobi doono wax khasaare ah oo lala socdo shixnado badan - mar iyo dhammaanba Source .